Izindaba tindzaba letimfisha of Ernest Hemingway njalo ethathwe ekuphileni futhi babe incazelo efihliwe, ezingasetshenziswa ukuxazulula kuphela ucabangisise ukufunda umkhiqizo. Umlobi yena yayilula futhi umuntu evulekile, ngakho-ke usebenza nabalingiswa abasemqoka abantu abavamile besho nokusho Hemingway. "I-Old Man noLwandle", uvumela isifinyezo sezinto lapho ukuqonda ithalente okukhulu umbhali, usitshela isiphetho umdobi ngubani samuntu kwamandla omuntu, ukuphikelela nokuthembela ayenganqobeki.
Old Rybak Santyago unezinsuku ezingama-84 kufika ekhaya ngaphandle nibambe. Naye phambi ukudoba umfana, umfundi wakhe, kodwa ngemva ukwehluleka njalo, nabazali bakhe basuke sinqatshiwe ukuya olwandle kanye bomuntu omdala, ithunyelwa kwezinye izikebhe. Amazwibela "The Old Man noLwandle" utshela okwengeziwe ubungani oqinile abantu ezahlukene amabili anjalo. Umfana othanda umuntu omdala futhi wazisola kakhulu ngaye, wazi ngandlela-thile ukusiza uthisha wakhe, Manolin ehlangana laye kusihlwa futhi usiza liyabhekisela ngenela ekhaya.
Umdobi yayiyizwe elimpofu kakhulu futhi nginesizungu, kunzima ukuphila Hemingway yakhe ngemibala ezichazwe kule noveli "The Old Man noLwandle." Isifinyezo indaba uthatha umfundi ngalolo suku, lapho lowo muntu ethembisa umfana ukuthi namuhla nje babamba inhlanzi. Umdobi iya ulwandle ekuseni, wasebenzisa le ndlela ube kude izinsuku, ukuhlala wedwa ngamaza. Umuntu sokuxoxisana okuqhubekayo nge izinyoni, izinhlanzi, ilanga. Kubonakala ubuhlobo nemizwa onayo ngomunye nomunye umuntu omdala nolwandle enamandla kakhulu.
Executive Summary kubonisa kahle ukuthi umdobi uyaziqaphela imikhuba eziphila olwandle, ukuze ngamunye ayivusa libhekisela ngendlela yakhe. Ngemva kwesikhathi esithile ngemva kokuhamba kolwandle, leli xhegu unomuzwa wokuthi umugqa wakhe wayelulele. Uyakuqonda ukuthi uye wabanjwa inhlanzi enkulu kakhulu, kodwa idonsele ngalé kwaso. Imayini akuyona azimisele ukudela bese idonsa isikebhe towed phambidlana off ogwini.
Human amandla, ukuphikelela, ukuzethemba futhi ephakeme kunabanye - ". I-Old Man noLwandle" konke lokhu kuchazwa indaba Amazwibela yembula umfundi zonke imizwa umdobi, wabhekana nazo ngesikhathi amahora amaningi ukulwa ne izinhlanzi. Wayengase usike emgqeni futhi ngiyeke, kodwa akazange ufuna ukuyeka, nakuba ngangilihlonipha yimpango yabo ukungapheli futhi bomele ukuphila. Ngosuku olulandelayo, izinhlanzi bentanta ezinsikeni zawo, futhi umdobi okuqeda inhlendla wakhe, khona-ke iboshelwe wakhe saya esikebheni, waya endlini yakhe.
Njengoba wezwa iphunga igazi, umkhumbi waqala ukuya ushaka, leli xhegu waziphindiselela okusemandleni, kodwa namanje waklebhula nezixhobo omkhulu wenyama esisulwini ayo abizayo. Man ngomkhumbi ekhaya ebusuku, lonke okudotshwa wayelele. Ekuseni, kwenzekani uhambo okudoba, umfana wabona ngebhange wokukhala Santiago, futhi isikebhe sakhe sasihlobene yokhalo omkhulu seqhwa nge ezinkulu, useyili-like, umsila. Manolin uthulisa umdobi futhi uthi manje izosebenza kuphela naye.
Hemingway wakwazi ukwembula idrama yangempela noveli "The Old Man noLwandle." Amazwibela uthatha umfundi ku ekuseni lapho izivakashi abacebile ukubuthana lolwandle ukuze sibheke le isimangaliso esasingakaze senziwe - elikhulu izinhlanzi skeleton, kodwa akekho kubo abazange baqonde ukuthi kwenzekani ngempela.
Biography emfushane: Oskar Uayld - indoda-indida
Izincwadi zebhizinisi Phezulu: simo
Sumarokov, Krylov, Trediakovskii: abalobi inganekwane zembula ngesihloko esifanayo, kodwa namanje ezahlukene kakhulu
Nebugagu betemibhalo, noma ngaphandle ukuthi ngeke zikwazi ukuthi zenze abalobi
Umzimba eliphumelelayo ezinqeni
Bagibele ezinzwa entanyeni, yini okufanele uyenze?
"Enterofuril": ngaphambi kokudla noma ngemva? Izici zomuthi kanye nokubuyekeza
"Simbiolakt Compositum": yokusetshenziswa, analogs kanye nokubuyekeza
Indlela yokufaka i-router - isinyathelo ngesinyathelo sesinyathelo
"Mercedes-Benz Actros": izinto ezithakazelisayo kakhulu mayelana iloli wezwe best
I-Nevyanskaya incline tower: ikheli, ukuvakasha, amahora wokuvula, isithombe